အတွင်းဖိုင်ဘာနှင့်အပြင်ဘက်ရော်ဘာဖိုင်ဘာဖန်ထည်အင်္ကျီလက်များတရုတ်ကာကွယ်ရေးလက်ပေးသွင်းသူ - လက်ကားရောင်း ၀ ယ်ခြင်းလျှော့စျေးပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်း - Dongguan Dabeini Electronics Co. , Ltd.
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > insulator တွင်လည်းလက် > အဆင့်ဆီလီကွန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော flungglass လက်ရှည် > အတွင်းဖိုင်ဘာနှင့်အပြင်ဘက်ရော်ဘာဖိုက်ဘာမှန်လက်အင်္ကျီလက်
အတွင်းပိုင်းဖိုင်ဘာနှင့်အပြင်ဘက်ရာဘာဖန်ထည်အမျှင်များအတွက်အထူးမြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသောပစ္စည်းများပေါင်းစပ်ထားခြင်းကြောင့်မြင့်မားသောအပူချိန်ထည်သည်အစားထိုးရန်ခက်ခဲသောအခြားအလားတူပစ္စည်းများစွာရှိသည် - မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်၊ အပူလျှပ်ကာစွမ်းဆောင်ရည်၊ မီးလျှံနှေးသောစွမ်းဆောင်ရည်၊ လျှပ်စစ်လျှပ်ကာစွမ်းဆောင်ရည် ဓာတုဗေဒတည်ငြိမ်မှု၊ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ အအေးခံနိုင်မှု၊ ရေခုခံနိုင်မှု၊ ရေနံခုခံနိုင်မှု၊ အိုဇုန်းလွှာခံနိုင်ရည်၊ ဗို့အားခံနိုင်မှု၊ arc ခုခံနိုင်မှု၊
၁။ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေး၊ အလုပ်သမားများ၏ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ရန်
အတွင်းပိုင်းဖိုင်ဘာအတွင်းရှိအယ်ကာလိုင်း - အခမဲ့ဖန်ဖိုင်ဘာနှင့်အပြင်ဘက်ရော်ဘာဖန်မျှင်အမျှင်များသည်ခိုင်ခံ့သောဆန့်စွမ်းအား၏လက္ခဏာများရှိသည်။ အရေးအကြောင်းမရှိခြင်း၊ ကွဲခြင်း၊ မီးတောင်ဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်မသောက်ရခြင်း၊ လောင်ကျွမ်းလွယ်ခြင်းနှင့်ကောင်းသော insulator တွင်လည်း။ ၎င်းသည်၎င်း၏ဘေးကင်းရေးနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်ရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အလုပ်သမားများ၏ကျန်းမာရေးကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွင်ရောဂါများဖြစ်ပွားမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ အခြားထုတ်ကုန်များနှင့်မတူဘဲ၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအလွန်အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော။
2. Superior မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ
အတွင်းပိုင်းဖိုင်ဘာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဆီလီကွန်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အပြင်ဘက်ရော်ဘာဖန်မျှင်အမျှင်အဖုံးများသည်အော်ဂဲနစ်အုပ်စုများနှင့်အော်ဂဲနစ်ဖွဲ့စည်းပုံတို့ပါ ၀ င်သည်။ ဤအထူးဖွဲ့စည်းမှုနှင့်မော်လီကျူးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံက၎င်းသည်အော်ဂဲနစ်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပေါင်းစပ်စေသည်။ အခြားပေါ်လီမာပစ္စည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်း၏ထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ရည်သည်မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ဆီလီကွန်အောက်စီဂျင် (Si-O) သည်အဓိကကွင်းဆက်တည်ဆောက်ပုံအနေဖြင့် CC ၏စွမ်းအင်သည် ၈၂.၆ kcal / mole ဖြစ်ပြီးအော်ဂဲနစ်ဆီလီကွန်တွင် Si-O ၏စွမ်းအင်က ၁၂၁ kcal / mole ဖြစ်ပြီးအပူတည်ငြိမ်မှုမြင့်မားသည်။ အပူချိန် (သို့မဟုတ်ဓါတ်ရောင်ခြည်ထိတွေ့မှု) သည်မော်လီကျူး၏ဓာတုဗေဒသည်မကျိုးပဲ့နိုင်ပါ။ silicone သည်မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရုံသာမကအပူချိန်ကိုလည်းခံနိုင်ရည်ရှိပြီးကျယ်ပြန့်သောအပူချိန်အကွာအဝေးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဓါတုဗေဒဂုဏ်သတ္တိများဖြစ်စေ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများဖြစ်စေအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုသည်အလွန်သေးငယ်သည်။
အရည်ပျော်သောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်လျှပ်စစ်မီးဖို၌အပူချိန်လွန်စွာမြင့်မားပြီးအပူချိန်မြင့်မားစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ (လျှပ်စစ်ဂဟေလုပ်ငန်း၌လည်းအလားတူဖြစ်သည်) အအေးနှင့်အစိုင်အခဲဖြစ်ပြီးနောက်ပိုက်သို့မဟုတ်ကေဘယ်လ်ပေါ်တွင်တံတွေးကိုဖွဲ့သည်၊ ၎င်းသည်ပိုက်သို့မဟုတ်ကေဘယ်ကြိုး၏အပြင်ဘက်ရှိရာဘာကိုခိုင်မာစေလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်ထကြွခြင်းနှင့်အက်ကွဲ။ ထို့အပြင်အကာအကွယ်မဲ့ပစ္စည်းနှင့်ကေဘယ်များပျက်စီးသွားသည်။ မျိုးစုံသော silica gels များဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောအတွင်းရှိဖိုင်ဘာနှင့်အပြင်ဘက်ရာဘာဖိုင်ဘာလက်အင်္ကျီလက်များသည်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုကာကွယ်မှုများစွာကိုရရှိသည်။ အပူချိန်ခံနိုင်မှုသည် ၆၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိရှိနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သံ၊ သံရည်နှင့်ကြေးနီအလူမီနီယံတို့ကိုထိရောက်စွာပိတ်ဆို့နိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောပတ် ၀ န်းကျင်ကေဘယ်ကြိုးများနှင့်စက်ပစ္စည်းများပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်အပူချိန်မြင့်သောအရည်ပျော်ပစ္စည်းအဖြစ်ဖြန်းသည်။
၄။ အပူကာကွယ်ခြင်း၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်စားသုံးမှုလျှော့ချခြင်း၊ ဓါတ်ရောင်ခြည်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်
အပူချိန်မြင့်သောအလုပ်ရုံများ၌ပိုက်လိုင်းများ၊ အဆို့ရှင်များသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများသည်အတွင်းပိုင်းအပူချိန်အလွန်မြင့်မားသည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်အကာအကွယ်ပစ္စည်းများမပါရှိပါကလောင်ကျွမ်းမှုသို့မဟုတ်အပူဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အထူးသဖြင့်အတွင်းပိုင်းဖိုင်ဘာနှင့်အပြင်ဘက်ရာဘာဖန်မျှင်အဖုံးသည်အခြားပေါ်လီမာပစ္စည်းများထက်အပူပိုမိုတည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ ဓါတ်ရောင်ခြည်ခုခံနိုင်စွမ်းနှင့်အပူထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မတော်တဆမှုများကိုကာကွယ်ခြင်း၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ပိုက်လိုင်းရှိအလယ်အလတ်မှတိုက်ရိုက်အပူကိုကာကွယ်ခြင်း။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏အပူချိန်သည်အလွန်မြင့်မားသောကြောင့်၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်သို့ကူးစက်သောကြောင့်အအေးခံမှုကိုသက်သာစေသည်။
၅။ အစိုဓာတ်ထိန်းပစ္စည်း၊ ရေနံဆန့်ကျင်ရေး၊ ရာသီဥတုဆန့်ကျင်သောအိုမင်းမှု၊ လေထုညစ်ညမ်းမှုတိုက်ဖျက်ရေးနှင့်အသုံး ၀ င်သောပစ္စည်းများ၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း
အတွင်းပိုင်းဖိုင်ဘာနှင့်အပြင်ဘက်ရော်ဘာဖိုက်ဘာမှန်လက်များသည်အားကောင်းသောဓာတုဗေဒတည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ အော်ဂဲနစ်ဆီလီကွန်သည်ရေ၊ ရေ၊ အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီတို့ကိုမတုံ့ပြန်ပါ။ ၎င်းကိုသက်တမ်း ၂၀၀ အတွင်းအိုမင်းခြင်းမရှိဘဲအသုံးပြုနိုင်ပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အောက်ရှိလုပ်ငန်းသက်တမ်းဆယ်စုနှစ်များစွာကြာမြင့်စွာဤအချိန်အခါများတွင်ပိုက်လိုင်းများ၊ ကေဘယ်များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုအများဆုံးအကာအကွယ်ပေးလိမ့်မည်။ အလွန်တိုးချဲ့လိမ့်မည်။
၆။ အိုဇုနျးခုခံမှု၊ ဗို့အားခုခံမှု၊
အတွင်းပိုင်းဖိုင်ဘာနှင့်အပြင်ဘက်ရာဘာဖန်မျှင်အဖုံး၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ကိုအော်ဂဲနစ်စီလီကာဂျယ်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသဖြင့်၎င်း၏အဓိကကွင်းဆက်မှာတည်ရှိပြီးဖြစ်သော -Si-O- ဖြစ်၍ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့်အိုဇုန်းလွှာများပြိုကွဲရန်မလွယ်ကူပါ။ မြင့်မားသောအပူချိန်တောင့်တင်းကောင်းမွန်သောလျှပ်စစ် insulator တွင်လည်းဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ၄ င်းတို့၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဆုံးရှုံးမှု၊ ဗို့အားခံနိုင်မှု၊ arc ခုခံနိုင်မှု၊ Corona ခုခံမှု၊ အသံအတိုးအကျယ်ခုခံမှုနှင့်မျက်နှာပြင်ခုခံမှုတို့သည်လျှပ်ကာပစ္စည်းများတွင်အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါသက်ရောက်မှုသေးငယ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်အီလက်ထရောနစ်နှင့်လျှပ်စစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောတည်ငြိမ်သောလျှပ်စစ်လျှပ်ကာပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
၇။ မီးတောက်နောက်ကျခြင်း၊ ဖြစ်ပွားမှုနှင့်မီးပြန့်နှံ့မှုကိုလျှော့ချပါ
အကယ်၍ ပိုက်လိုင်းသည်မီးလောင်လွယ်သောသို့မဟုတ်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသောမီဒီယာများကိုသယ်ဆောင်ပါကယိုစိမ့်မှုဖြစ်ပေါ်သည့်အခါမီးလောင်လွယ်ခြင်း၊ ဒေသတွင်းမြင့်မားသောအပူချိန်ကြောင့်ကေဘယ်လ်လောင်လေ့ရှိသည်။ အတွင်းပိုင်းဖိုင်ဘာနှင့်အပြင်ဘက်ရာဘာဖန်မျှင်အဖုံးသည်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်သည့်ဖန်မျှင်နှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ မျက်နှာပြင်ဆီလီကွန်ဂျယ်လ်သည်မီးလျှံနှောင့်နှေးမှုဖြစ်စေရန်သင့်လျော်သောမီးလျှံတားဆေးများနှင့်အခြားအထူးပစ္စည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ မီးရှိလျှင်ပင်၎င်းသည်မီးမပျံ့နှံ့နိုင်အောင်တားဆီးနိုင်ပြီးအတွင်းပိုင်းပိုက်လိုင်းများအားပျက်စီးခြင်းမှကာလအတန်ကြာကာကွယ်နိုင်ပြီးအရေးကြီးသောအချက်အလက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကဲ့သို့သောအရေးကြီးသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။
ဝါယာကြိုးကြိုး၊ ပူပြေးသမား၊ သံမဏိ၊ အရည်ကျိုခြင်း၊ သင်္ဘောတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အခြားမြင့်မားသောအပူချိန်areasရိယာများ၊ အပူareaရိယာကြိုးများ၊ ပိုက်လိုင်းပိုက်များ၊ ကြိတ်စက်ကြိတ်ကြိုးများ၊ , ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၊ မော်တော်ကားဝါယာကြိုးကြိုးနှင့်အိပ်ဇောပိုက်စသည်။
ဝိသေသလက္ခဏာ parameter သည်
-10â "ƒ ~ + 200â" ƒ
200 ±2â "ƒ24hâ" 1/2 မူရင်းဗို့အားတန်ဖိုးကို
200â, 12 နာရီ, အက်ကြောင်းမရှိ
စမ်းသပ်အပူချိန် 24 နာရီ, 200âဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုထုတ်ယူပြီးစမ်းသပ်ရန်အခန်းအပူချိန်တွင်ထားပါ။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်ပျက်စီးခြင်းသည်အိုမင်းခြင်းမပြုမီပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဗို့အား၏ထက်ဝက်ထက်မနည်းပါ။ မျက်နှာပြင်တွင်အက်ကွဲခြင်းမရှိပါ။
စမ်းသပ်အပူချိန်-10â, 1 နာရီအတွင်းအဘယ်သူမျှမအက်ကြောင်း
စမ်းသပ်မှုအပူချိန်-10â, 1 နာရီ, ဒီသတ်မှတ်ချက်၏ casing အပေါ်စမ်းသပ်ပြွန်ပြန်လှည့်နှင့်6ကြိမ်ပြန်ရစ်, အဖုံးမျက်နှာပြင်အပေါ်ယံပိုင်းအက်ကွဲသို့မဟုတ် peeling ဖြစ်ရပ်ဆန်းမရှိပါ
1000 ± 50Btu / ft မီးလျှံဖြင့်မီးလောင်ရာနှင့်အလျားလိုက်ထားရှိသည့်အဖုံးကိုအပြင်ဘက်မီးလျှံနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ပြီးတစ်ကြိမ်လျှင် ၁၅ စက္ကန့်လျှင်တစ်ကြိမ်၊ ၂ ကြိမ်အလောင်ကျွမ်းမည်။ စက္ကန့် ၃၀ ထက်မကျော်လွန်ပါနှင့်အလိုအလျောက်ငြိမ်းသွားနိုင်သည်
Volume ကိုခံနိုင်ရည် (Î© .CM)
စေးကပ်ခြင်းမရှိ၊ ပုံပျက်ခြင်းမရှိ၊ ပျော့ပျောင်းခြင်းမရှိပါ
၂၄ နာရီလုံးထည်ကိုရေထဲထည့်ပြီးတဲ့အခါ၊ မျက်နှာပြင်ပေါ်ကစေးကပ်၊ ပုံပျက်နေမှာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် 5G ခေတ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူစမတ်ကိရိယာများနှင့်သက်ဆိုင်သောထုတ်ကုန်များကိုထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့နှင့်အတူစဉ်ဆက်မပြတ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်တိုးတက်မှုနှင့်အစဉ်လိုက်တိုးတက်ခြင်းတို့၏အယူအဆကိုလိုက်နာသည်။ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသောအဓိကသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့သည်အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးအခန်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအခန်းကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဆက်စပ်သောအရည်အသွေးစစ်ဆေးစက်သည်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုသေချာစေသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်များစွာရှိသည်၊ လက်မှုလုပ်ငန်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရပ်များနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆို၍ ISO9001 အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်၊ TS16949, UL, SGS နှင့်အခြားအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များကိုအောင်မြင်စွာရရှိခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုစျေးကွက်အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရန်အခိုင်အမာပြောကြားသည်။ "သမာဓိ၊ အရည်အသွေး၊ အကျိုးရှိမှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု" ၏လေးပါးတ ဦး တည်းသောစီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ကိုလိုက်နာ။ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပဖောက်သည်များကိုအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များ၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းများ၊ ပြီးပြည့်စုံသော ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးရှိ
ထုတ်ကုန်ကိုယ်နှိုက်၏အရည်အသွေးကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း 1. မကျေနပ်မှု။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူအားပြtheနာကိုဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့သဘောတူထားသည့်အချိန်အတွင်းကူညီလိမ့်မည်။
၂။ အကယ်၍ ထုတ်ကုန်ကိုလူလုပ်အကြောင်းပြချက်များကြောင့်ပုံမှန် အသုံးပြု၍ မရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြtheနာ၏အကြောင်းရင်းကိုဖောက်သည်အားရှင်းပြပြီးဤပြthisနာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်သာလွန်ကြောင်းဖော်ပြပြီးသုံးစွဲသူ၏ပြproblemနာအပေါ် အခြေခံ၍ သုံးစွဲသူအားအခြားအဖြေများပေးသည်။
မေး။ အပူချိန်ခံနိုင်သလား။ အက်ကွဲမှုမြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံပြီးနောက်ပေါ်ပေါက်လိမ့်မည်နည်း
A: အတွင်းရှိဖိုင်ဘာနှင့်အပြင်ဘက်ရာဘာဖန်မျှင်အဖုံးသည်အလွန်မြင့်မားသောအပူချိန်ခံနိုင်သည့်ဖန်မျှင်နှင့်ပြုလုပ်သည်။ မျက်နှာပြင်စီလီကာဂျယ်လ်အားအထူးသင့်လျော်သောမီးလျှံတားဆေးများကဲ့သို့သောအပူချိန်ခံနိုင်ရည်နှင့်ရေရှည်စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုရန်အထူးပစ္စည်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အက်ကြောင်းနှင့်အက်ကြောင်းများမပါရှိသည့်အပူချိန်အကွာအဝေး-10â200200။
A: ကျွန်ုပ်တို့၏သမားရိုးကျအတွင်းပိုင်းဖိုင်ဘာနှင့်အပြင်ဘက်ရော်ဘာဖန်မျှင်အမျှင်အားဗို့အားခံနိုင်ရည်အားပျမ်းမျှဗို့အား ၄ မျိုးခွဲခြားသည်။ DBN-1500V, DBN-2500V, DBN-4000V, DBN-7000V, DBN-10000V ။
A: ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းပိုင်းဖိုင်ဘာနှင့်အပြင်ဘက်ရော်ဘာဖိုက်ဘာမှန်လက်အင်္ကျီလက်ပစ္စည်းများသည်မီးလျှံကာအမေရိကန် UL စမ်းသပ်မှုစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။
Hot Tags: insulator တွင်လည်းလက်, တရုတ်, အတွင်းပိုင်းဖိုင်ဘာနှင့်အပြင်ဘက်ရော်ဘာဖိုက်ဘာမှန်လက်ထုတ်လုပ်သူ, လက္ကား, ဝယ်, စျေးနှုန်း, အမြောက်အများ, လျှော့စျေး, ကိုးကား။
ဆီလီကွန် Coated ဖိုက်ဘာမှန်လက်